July 2021 - Page3of5- Myanmar Fire Services Department
Fire accident at the asphalt manufacturing plant in Pyigyidagun township, Mandalay region
editor | Jul 22, 2021 | News, မီးလောင်မှုသတင်း
20.7.2021 at about 10 08, Mandalay region fire department received the fire call occurred at the asphalt manufacturing plant located at the Yartaw ward, 62 street, Pyigyidagun township, Mandalay region. Upon the information, total of 40 firefighters and 60 auxiliary...
Flooding occurred in Manton township, Shan state
editor | Jul 20, 2021 | News, ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးသတင်း
July 19, at about 14 45, flooding occurred in Manton township, Taunggyi district, Shan state after the heavy rain. Fire personnel from Manton township evacuated the locals to the safe area and helped to remove the dirt and debris after the flood. It was reported that...
House fire occurred at the Kalay township, Kalay district, Sagaing region
editor | Jul 19, 2021 | News, မီးလောင်မှုသတင်း
July 18, at about 11 00, fire occurred at the two storey house located at the Taungzalet ward, Kalay township, Kalay district, Sagaing region. The fire was started from the overheated electric voltage stabilizer and spread to the nearest places. Upon the report, fire...
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ မအူပင်ခရိုင်၊ ညောင်တုန်းမြို့နယ်၊ အမှတ်(၇)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းတွင် မီးလောင်မှုဖြစ်ပွား
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ မအူပင်ခရိုင်၊ ညောင်တုန်းမြို့နယ်၊ အမှတ်(၇)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းရှိ ပိုင်ရှင် ဦးစိုးဝင်း၏ (၂၅x၈၀)ပေ၊ သွပ်မိုး၊ အုတ်ကာ၊ ကွန်ကရစ်ခင်း(၂)ထပ်၊ အိုဆာကာ တည်းခိုခန်းတွင် ၁၈.၇.၂၀၂၁ ရက်နေ့၊ ၁၀ ၃၅ အချိန်ခန့်က တည်းခိုခန်းအပေါ်ထပ်တွင် သွယ်တန်းထားသော...
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ သာဓုကန်စက်မှုဇုန်၊ မဟူရာလမ်းနှင့် ကျောက်စိမ်းလမ်းထောင့်၊ အမှတ်(၇၇/၇၈)တ ....
editor | Jul 14, 2021 | News, မီးလောင်မှုသတင်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ သာဓုကန်စက်မှုဇုန်၊ မဟူရာလမ်းနှင့်ကျောက်စိမ်း လမ်းထောင့်၊ အမှတ်(၇၇/၇၈)တွင် ပိုင်ရှင် Mr Yu Jian (တရုတ်နိုင်ငံသား)၏ Khaing Khaing Group ကားစက်ရုံခြံဝန်းရှိ (၂၅၀x၁၀၀)ပေ၊ Steel Structure(၁)ထပ် ကားပစ္စည်းအဟောင်းများ ထားရှိသည့်...